Incwadi Yesikhokelo Seswekile - South Africans with Diabetes
Simanyene no Pick n Pay ukuzisa incwadi yesikhokelo seswekile yasimahla- ukukunceda ufumane indlela eya kubomi obunempilo, obonwabileyo nesifo seswekile. Iincwadi ziyafumaneka simahla kuzo zonke iikhemesti zakwa ngoNovemba Pick n Pay .
Incwadi eluncedo yesikhokelo seswekile
Fumana zonke iintlobo zolwazi oluncedo, kwinto omele uyenze ukuba ufumanise ukuba unesifo seswekile ukukhawulezisa malunga nokunyangwa kwamehlo, ukhathalelo lwenyawo kunye nokuhamba nesifo seswekile, iiresiphi ezimnandi, isicwangciso sokutya okunempilo, ukuqonda iziseko zeswekile kunye nokutya kweswekile, ukusebenzisa inkuthazo kunye nenkuthazo yokuphila ubomi obunempilo nesifo seswekile.
Uncedo kunye nethemba kwabo banesifo seswekile
Isweet Life ineminyaka esi-8 ngoku, kwaye ndiyazingca ngoluntu esikhulele kulo. Iwebhusayithi yethu kunye nephepha likaFacebook zibonelela ngoncedo, iingcebiso, kunye nendawo yokunxibelelana nabanye abantu abanesifo seswekile.
Le ncwadi yesikhokelo seswekile ingakumbi kwabo basandula ukufunyanwa. Xa uqala ukufumanisa ukuba unesifo seswekile, uziva ngathi nguwe wedwa ophila nale meko. Silapha ukukuxelela ukuba: awuwedwa kule nto kwaye silapha ukukunceda kwinqanaba ngalinye lendlela.
Kule ncwadi yesikhokelo seswekile, siqulunqe zonke iingcebiso zethu eziluncedo ngokuphila nesifo seswekile. Ungayifunda kwi-intanethi apha, okanye ukhuphele ikopi engezantsi (cofa nje ku ‘dowunlodi’).